Jeesow: ” Xogta Qaraxii SYL ee shalay waa la haayay laakiin Hay’adaha Amniga ayaa ka gaabiyay * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho ( Mareeg)-Guddoomiye ku xigeenka Guddiga Arrimaha Gudaha iyo Amniga Baarlamaanka Soomaaliya Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo ka mid ah Xildhibaanadii ka badbaaday Qaraxii shalay ka dhacay Laamiga hormara Madaxtooyada Soomaaliya ayaa sheegay in gaariga lagu fuliyay Qaraxa la haayay xogtiisa balse ay ka gaabiyeen laamaha qaabilsan Ammaanka ka hortaga Qaraxaas.
Xildhibaan Jeesow ayaa xusay in Ciidamada Ammaanka looga baahnaa muujinta feejignaan dheeri ah si looga hortago wax kasta oo dhibaato ku keeni kara Amniga.
Daahir Amiin Jeesow ayaa ka digay Qaraxyo kale oo Xarakada Al Shabaab ay ka fuliyaan Magaalada Muqdisho.
“ waxaan ugu baaqayaa Shacabka Soomaaliyeed in laamaha Ammaanka ay kala shaqeeyaan Nabad gelyada Magaaladooda Muqdisho ee ay ku nool yihiin” ayuu hadalkiisa sii raaciyay Jeesow.